I-pedicure yobungcweti - Ungakwenza kanjani igxathu negxathu | Bezzia
I-pedicure yobungcweti: Ungayenza kanjani igxathu negxathu
USusana godoy | 12/09/2021 20:00 | Ubuhle
Ngabe ufuna ukuthola i-pedicure yobungcweti? Ngakho-ke akukho okufana nokulandela uchungechunge lwezinyathelo eziyisisekelo nokuziqalela ukukwenza ngokunethezeka ekhaya lakho. Ngakho-ke, uzoba nesikhathi esikhethekile sakho, ukujabulela umzuzu oyingqayizivele futhi uzuze umphumela ongcono wezipikili zakho, ngoba izinyawo zakho nazo ziyakudinga.
Kuyiqiniso ukuthi ngesikhathi sehlobo sijwayele ukukunaka kuqala, kepha noma ngabe kufika ikwindla, akumele sikuyeke kuphunyuke. Ngoba i- ukunakekelwa kwezinyawo futhi kuyisisekelo futhi ngenxa yalesi sizathu, kudingeka sikwenze unyaka wonke. Ungaphuthelwa ukuthi ungakwenza kanjani ngoba manje sikutshela konke.
1 Lungiselela ukugeza ngezinyawo
2 I-pedicure yobungcweti: Sika bese ufaka izinzipho
3 Nakekela ama-cuticles nezithende
4 Ukukhetha koqweqwe lwawo
5 Ukuthinta kokugcina
Lungiselela ukugeza ngezinyawo
Kwezinye izimo akusona isinyathelo sokuqala ngaso sonke isikhathi, kodwa okwethu kunjalo. Ngoba ngale ndlela singenza isikhumba sithambe uma kukhulunywa ngokususa amaphutha athile. Ngakho-ke, akukho okufana namanzi amancane ashisayo esitsheni esikhulu esivumela ukuthi sibeke izinyawo zombili. Ungangeza amaconsi ambalwa kawoyela abalulekile ukuqaphela konke ukuthamba kodwa futhi nokuzola okuphelele. Ngakho-ke, kufanele ulinde amanzi aze acishe abande. Ngakho-ke ungahlala usebenzisa ngokunenzuzo imisebenzi ekhompyutheni noma yini oyithandayo.
I-pedicure yobungcweti: Sika bese ufaka izinzipho
Ngemuva kokuthi ugeze futhi womisa izinyawo zakho, sekuyisikhathi sokuyocheba izinzipho. Khumbula ukuthi kungcono ukungabaniki ubujamo obuyindilinga ngoba bangaba yinyama, kepha uzokwazi ukujabulela ukusika okulinganiselayo, ukuze kuthi lapho sekufika umbala kuzobukeka kufana kakhulu. Vele, ngaphezu kokusika uqobo, udinga ukuwafaka. Njengoba lesi sinyathelo sibalulekile ukuze sikwazi ukuqeda izingxenye ezinolaka noma imiphetho ehlala iphuma njalo.
Nakekela ama-cuticles nezithende
Izisiki zingenye ingxenye ebalulekile yezandla nezinyawo zombili.. Ngakho-ke, udinga ukubanakekela uma ungafuni ukuwasusa. Okuzokwenza ukufaka amathonsi kawoyela ambalwa kuwo. Ukuze sikwazi ukuzithambisa. Sebenzisa futhi uhlikihle lonke unyawo, ugcizelele ingxenye yezithende. Ngoba kungenye engasinika izinkinga futhi ibonakale imifantu ethile. Ngakho-ke, udinga ukufaka i-hydration bese uya etsheni le-pumice ukuze uvalelise isikhumba esifile. Uma usuqedile, sebenzisa isithambisi.
Ukukhetha koqweqwe lwawo
Kwesinye isikhathi singabeka upholishi kuzipikili lapho zingenaso isiphetho esijwayelekile. Uma kungenjalo, manje ungabheja esiteji sokugcina, okungukusetshenziswa kombala. Yize ngaphambili nje, kufanele ungeze ungqimba oluvikelayo futhi womile. Kuzoba isikhathi sokukhetha umbala woqweqwe lwawo. Ungenza idizayini ebushelelezi noma uyinikeze umcabango bese uya kudizayini yokudala, ngokwesibonelo, esikhonkwaneni senzwane enkulu. Noma ngabe ukhetha ini, bapende bese uwavumela ukuthi omile ngokuphelele. Uma usomile, udinga ukufaka ungqimba lokukhanyisa ukwenza umphumela ube wesiteleka ngokwengeziwe futhi uhlale isikhashana.
Lapho sesilufakile uqweqwe lwawo, kuyiqiniso ukuthi kufanele siliyeke lome kahle kakhulu. Kepha kunesinyathelo esisodwa sokugcina okusamele sisithathe leso okungukuthi, futhi siyasidinga ukubheja kusendlalelo sesithambisi unyawo lonke. Kuyiqiniso ukuthi bekuvele kuyisinyathelo esisithathile kodwa kuzobe kungagcini. I-hydration eyengeziwe iba ngcono ngakho-ke yisikhathi sokubheja kuyo. Manje uzoba ne-pedicure efanelekile ezokwazi ukukusebenzisa noma nini nanoma kuphi lapho ufuna khona. Ngokuqinisekile ngeke kube nzima njengoba bekuyobonakala sengathi!
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » I-pedicure yobungcweti: Ungayenza kanjani igxathu negxathu
I-eyelash perm: Konke odinga ukukwazi
Izindlela zokunciphisa ukukhathazeka